Real Madrid oo la soo wareegaysa xiddig kale oo ka ciyaara Horyaalka Premier League haddii ay ku guuldarreystaan saxiixa Eden Hazard – Gool FM
(Madrid) 22 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa la soo warinayaa inay la soo saxiixan doonaan xiddig kale oo ka dheela horyaalka Premier League haddii ay ku guuldarreystaan doonista ciyaaryahan Eden Hazard.
Laacibka garabka uga ciyaara kooxda West Ham United ee Felipe Anderson ayaa bartilmaameed u noqday Real Madrid, waxaana ay rabtaa inay soo qaadato haddii ay gacanta ku soo dhigi waayaan Hazard.
Anderson ayaa dhaqaaq yaab leh sameeyey xagaagii la soo dhaafay isagoo ku soo biiray kooxda Hammers, xiddigan reer Brazil ayaana dhaliyey siddeed gool, waxaana uu caawiyey afar gool oo kale 31 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Premier League.
25-sano jirkaan ayaa sidoo kale gacanta ku haysta heshiis waqti dheer oo uu ku sii joogayo London Stadium, laakiin warsidaha Sky Sports News ayaa warinaya in Real Madrid ay aad u jeceshay inay la soo wareegto kubbad sameeyahan.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Real Madrid ay eegi doonto inay la soo saxiixato Anderson haddii ay ku guuldarreystaan dadaalka ay ku doonayaan inay kooxda Chelsea kaga soo qaataan Eden Hazard.
Hazard ayaa lagu soo waramayaa inuu diiradda u saaran yahay Real Madrid suuqa xagaaga, laakiin kooxda Chelsea ayaa laga yaabaa inay dalbato lacag ka badan 100 milyan oo gini.
Real ayaana la filayaa inay ku faraxdo inay dalab 60 milyan oo gini ah ka gudbiso Anderson si ay ula soo saxiixato halkii 100 milyan oo gini ka badan ay ku dooni lahayd xiddiga xulka qaranka Belgium ee Hazard.